Manana Vaovao Mampientam-po momba ny Daty Famotsorana ny Assassin's Creed: The Ezio Collection! - Lalao
Manana vaovao mampientam-po momba ny datin'ny famoahana ny Assassin's Creed: The Ezio Collection!
Tsy mahagaga raha ny Assassin's Creed: The Ezio Collection dia handeha ho any amin'ny Nintendo Switch, ary manana ny fampahalalana rehetra tokony ho fantatrao momba ny lalao izahay alohan'ny hidirany amin'ny rafitrao.
Nandritra ny folo taona mahery, ny franchise lalao video Assassin's Creed dia nahomby tamin'ny sehatra Playstation . Ny mpamorona dia namoaka tantara hafa tanteraka izay nitranga an-jatony taona lasa izay ary misy Assassin.
Raha jerena fa ny Ezio Collection dia mety hampiditra lalao telo tsara indrindra amin'ny franchise, ny tompon'ny Nintendo Switch dia ho faly amin'ny fahatsinjovana ny fahafahana mitsambikina avy hatrany amin'ny hetsika.
Maro amin'ireo mpamorona lalao amin'ny indostrian'ny lalao no mamoaka lohateny vaovao amin'ny fotoana iray ihany. Vokany, be dia be ny fifaninanana, nefa mampahery ny mahita fa mbola ny kalitao avo indrindra.
Jereo koa : Ny famotsorana an'i God of War Ragnarok tamin'ny 2022 dia nohamafisin'ny PlayStation [Antsipirihan'ny antsipiriany]
Assassin's Creed: Daty famoahana Ezio Collection
Rehefa nanambara ity vaovao tsara tsy nampoizina ity ny mpamorona lalao Ubisoft, dia nipoaka ny mpankafy lalao tamin'ny fiandrasana fatratra. Betsaka ny olona nanantena ny hahita ny datin'ny famoahana ny Assassin's Creed: The Ezio Collection raha vao nambara izany.
Ny developers Ubisoft dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa ny Assassin's Creed: The Ezio Collection dia havoaka amin'ny Nintendo Switch amin'ny alakamisy 17 febroary 2022, miaraka amin'ny daty famoahana ny alakamisy 17 febroary 2022.
Noho ny fahafantarana fa nahomby ny franchise, dia afaka matoky isika fa rehefa navoaka ny lalao tamin'ny Febroary 2022, dia maro ny olona ao amin'ny indostrian'ny filokana no te hividy ny lalao avy hatrany aorian'ny famoahana azy. Ny lalao dia ho azo vidiana amin'ny ankamaroan'ny mpivarotra an-tserasera, mampiseho ny zava-misy fa afaka mahazo lalao telo amin'ny iray ianao amin'ny vidiny £32.95.
Jereo koa : Uncharted 5: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao!
Azo inoana fa i Ezio dia ho iray amin'ireo mpilalao malaza indrindra ao amin'ny franchise lalao video Assassin's Creed. Vokatr'izany, ny mpilalao Nintendo Switch dia haniry handray ny andraikiny indray.
Ho fanampin'ireo endri-javatra sy asa mitovy amin'izany rehetra izany rehefa navoaka tao amin'ny Playstation ny Ezio Collection, dia naka fotoana i Ubisoft mba hahazoana antoka fa tsy misy glitches ary ny sary dia tsara araka izay azo atao ho an'ny console tànana. tsara.
Manantena izahay fa ny lalao dia hiaina mifanaraka amin'ny andrasana ambony napetraky ny indostrian'ny lalao.
Ampahafantarinay anao ny fampahalalana vaovao momba ny Assassin's Creed: The Ezio Collection rehefa misy izany. Araho hatrany ny fanavaozana mandra-pahatongan'izany.
Jereo koa : Rehefa ela ny ela, dia ho afaka hilalao miaraka ireo mpilalao Horde sy Alliance ao amin'ny World of Warcraft
Izany no momba ny Assassin's Creed: The Ezio Collection. Araho hatrany ny fanavaozana bebe kokoa ary mariho ny tranokalanay ho an'ny vaovao sy fanambarana lalao bebe kokoa. Misaotra Mamaky!
Kid Rock dia nanambara ny lohatenin'ny rakikira vaovao (mety ho farany) lisitry ny datin'ny fitsangantsanganana noho ny laza ratsy
youtube ho mp3 mpanova mp3 tsara indrindra
avelao aho hihaino mozika vitsivitsy
kaody volamena mivantana tena xbox maimaimpoana tsy misy fanadihadiana
aiza no hijerena sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet tsy misoratra anarana
ny fomba hijerena sarimihetsika tsy ara-dalàna
azoko atao ve ny misintona ny fizarana netflix amin'ny mac-ko